အမြန်လမ်းမဘေးက အ​ပေါ်အင်​ကျီ င်္မပါ. ​ဘောင်​ဘီ စ​တောကင်​အတိုနဲ့.မိန်​က​လေးငယ်​အ​လောင်းတစ်​​လောင်း - APANNPYAY
Home / ပြည်တွင်းသတင်း / အမြန်လမ်းမဘေးက အ​ပေါ်အင်​ကျီ င်္မပါ. ​ဘောင်​ဘီ စ​တောကင်​အတိုနဲ့.မိန်​က​လေးငယ်​အ​လောင်းတစ်​​လောင်း
အမြန်လမ်းမဘေးက အ​ပေါ်အင်​ကျီ င်္မပါ. ​ဘောင်​ဘီ စ​တောကင်​အတိုနဲ့.မိန်​က​လေးငယ်​အ​လောင်းတစ်​​လောင်း
Apann Pyay 9:15 AM ပြည်တွင်းသတင်း Edit
မိန်​က​လေးငယ်​တစ်​ဦး အ​ပေါ်အင်​ကျီ င်္မပါ.​ဘောင်​ဘီ
အဆိုပါအ​လောင်းမှာ.​သေခြာ ဂဲနဲ့ ဖိဖုံးထားပြီ.​ဒေသခံရွာသားများက အပုတ်​နံမခံနိုင်​လွန်းတာ​ကြောင့်​.အနီနားရှာကျရာ.အဆိုပါအ​လောင်းကို
အဆိုပါမိုင်​တိုင်​​နေရာမှာ အများဆုံးရတနာပုံ တက္ကသိုလ်​ အတွဲများလာ​ရောက်​တာများသည်​ဟု အဆိုပါ​ဒေသခံရွာသူ/သားများက​ပြောသည်​။
၁၈.၂၅ကြားရှိပြီ.​​တက္ကသိုလ်​​ကျောင်းသူလို့လဲမှတ်​ချက်​​ပေး​နေကျသလို.ချစ်​သူချင်​​ချိန်း​တွေ့ပြီ.သားမယားပြုကျင့်​ခံရပြီ.အသတ်​ခံရတာဖြစ်​နိုင်​​ချေများသည်​ဟု.အဆို​နေရာကို​ရောက်​ရှိ​နေတဲ့ ရဲအချို့က ​ကောက်​ချက်​ကျ​နေကျပြီဖြစ်​စဉ်​ကိုဆက်​လက်​စုံးစမ်း​နေဆဲသာဖြစ်​သည်​။
ရုပ်​​လောင်းသည်​.​သေဆုံးတာ (၁ပါတ်​) ၁၀ရက်​အကြာ. ရှိ​နေပြီဟုသိရပါသည်​။.မည်​သူမည်​ဝါဆိုတာမသိရှိရ၍
မိနျ​က​လေးငယျ​တဈ​ဦး အ​ပျေါအငျ​ကြီ င်ျမပါ.​ဘောငျ​ဘီ
အဆိုပါအ​လောငျးမှာ.​သခွော ဂဲနဲ့ ဖိဖုံးထားပွီ.​ဒသေခံရှာသားမြားက အပုတျ​နံမခံနိုငျ​လှနျးတာ​ကွောငျ့​.အနီနားရှာကရြာ.အဆိုပါအ​လောငျးကို
အဆိုပါမိုငျ​တိုငျ​​နရောမှာ အမြားဆုံးရတနာပုံ တက်ကသိုလျ​ အတှဲမြားလာ​ရောကျ​တာမြားသညျ​ဟု အဆိုပါ​ဒသေခံရှာသူ/သားမြားက​ပွောသညျ​။
၁၈.၂၅ကွားရှိပွီ.​​တက်ကသိုလျ​​ကြောငျးသူလို့လဲမှတျ​ခကျြ​​ပေး​နကေသြလို.ခဈြ​သူခငျြ​​ခြိနျး​တှပွေီ့.သားမယားပွုကငျြ့​ခံရပွီ.အသတျ​ခံရတာဖွဈ​နိုငျ​​ခမြေားသညျ​ဟု.အဆို​နရောကို​ရောကျ​ရှိ​နတေဲ့ ရဲအခြို့က ​ကောကျ​ခကျြ​ကြ​နကေပြွီဖွဈ​စဉျ​ကိုဆကျ​လကျ​စုံးစမျး​နဆေဲသာဖွဈ​သညျ​။
ရုပျ​​လောငျးသညျ​.​သဆေုံးတာ (၁ပါတျ​) ၁ဝရကျ​အကွာ. ရှိ​နပွေီဟုသိရပါသညျ​။.မညျ​သူမညျ​ဝါဆိုတာမသိရှိရ၍